स्वास्थ्य/जीवनशैली | Sagarmatha TV
यस्तो छ जन्डिससँग चिल्लो र बेसारको सम्बन्ध
आँखा वा शरीरमा पहेंलो पन हुनु लाइ ‌जन्डिस भनिन्छ। चिकित्सकहरुले “जन्डिस रोग हैन, रोगको लक्षण मात्र हो” भनेपनि बिरामीले यो कुरा मान्दैनन् । जन्डिसका बारेमा समाजमा एक किसिमको हौवा फैलिएको छ। जसले गर्दा जानेका बुझेका मान्छे पनि जन्डिस हुँदा मुख बार्न पर्छ भन्दै‌‌ हिँड्छन । जन्डिस हुँदा मुख बार्नु भनेको भिरमा उभिएको ‌मान्छेलाई धकेलेर खसालेको […]
ग्रान्डी अस्पतालको अर्को काण्डः शिशुको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै लाखौं लुट
काठमाडौं । एकपछि अर्को काण्ड दोहोरिरहने ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालमा पुनः अर्को काण्ड दोहोरिएको छ। अस्पतालले गर्भदेखि नै निगरानी गर्दै आएको शिशुको उपचारमा चरम लापरवाही गरी लाखौं रुपैयाँ लुटेको भन्दै अभिभावकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएपछि अस्पतालको ठगी रहस्य खुलेको हो । अस्पतालले ९ महिनाको अवधिमा ५ पटक बालकको टाउकाको शल्यक्रिया गरी ३५ लाख भन्दा बढी […]
के हो फ्याटि लिभर समस्या, कसरी थाहा पाउने रोग लागेको ?
काठमाडाैँ । कलेजोको वरिपरी अत्यधिक मात्रामा बोसो जमेर धमनी साँघुरो भई रक्त- संचारमा पैदा हुने समस्यालाई फ्याटि लिभर भनिन्छ । आज भोलि धेरै जसो मानिसहरुमा यो समस्या देखा पर्ने गरेको पाइन्छ । तर अधिकतम मानिसहरुले फ्याटि लिभर भएको थाहा पाउदैनन्। जसले गर्दा समस्या जटिल बन्ने गर्दछ। निस्कृय जीवनशैली, अस्वस्थ खानपानका कारण तौल वृद्धि भई कलेजोमा […]
थाहा पाउनुहोस् खाली पेटमा पानी पिउँदाका फाइदा
स्वस्थ जीवनका लागि पानी सबैभन्दा उपयोगी हो । पानी पिउँनु आफैंमा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । तर यो गर्मीमा पानीको विशेष महत्व हुने गर्छ । हामीलाई लाग्ने भन्दै धेरै रोगहरु पानीका कारण लाग्ने गर्दछन् । पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । त्यसमा पनि खाली पेटमा पानी पिउँदा धेरै लाभ मिल्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । […]
युवामा बढ्दैछ मुटु रोगको जोखिम
‘मुटु’ मानव शरीरको अत्यन्तै संवेदनशिल अंग । हुनेखाने र धनाढ्यहरुलाई मात्र लाग्ने गरेको भनिएको मुटुरोगको अचेल युवापुस्तामा बढ्दै गएको छ । रोगका कारण हुने मृत्युमो २५ देखि ३० प्रतिशत मुटु रोगकै कारण हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
अस्पतालको लापरबाहीले डा. विमल अग्रवालको मृत्यू भएको आरोप, छानविन गर्न परिवारको माग
विराटनगर-आम नागरिक आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा सचेत हुन्छन । अन्य मानिसको स्वास्थ्य उपचार गर्ने डाक्टर आफ्नो स्वास्थ्य प्रति झन सचेत हुन्छ । तर विराटनगरमा भने सचेतता अपनाउँदा अपनाउँदै एक चिकित्सकको मृत्यु भएको छ । आफूलाई असहज भएपछि स्वास्थ्य समस्या आएको हो कि भनेर चेकजाँच गर्न अस्पताल पुगेका डाक्टर निको भएर घर फर्कन सकेनन् । यो प्रसंग […]
ग्यास्ट्रिकबाट बच्न नियमित र सन्तुलित भोजन खाने
खानपिनकै कारण लाग्ने ग्यास्ट्रिकको उपचार व्यवस्थित खाना नै रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । हाम्रो पेटमा उत्पादन हुने एक किसिमको अम्ल उत्पादन हुन्छ । त्यसले खानालाई पचाउने गर्छ । खानपानमा अनियमितता हुँदा उत्पादन हुने अम्लको मात्रा बढी हुन्छ । जसले पेटमा भएका अन्य तन्तुलाई पनि जलाउने काम गर्छ । यो अवस्था नै ग्यास्ट्रिक हो । यसलाई […]
कान छेड्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा!
अभिभावकले साना बच्चालाई रुवाउँदै कान छेड्दिने गरेका छन् । यो परम्परा विस्तारै फेसनकै रुपमा विकास भएपनि स्वास्थ्यका हिसावले पनि फाइदाजनक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। कानको लोतीमा हुने एक प्वाइन्टका कारण मानिसको जीवनमा कानले तरंग पैदा गर्छ । कान छेड्दा प्राय त्यही प्वाइन्ट वरपर छेडिने भएकाले मानिसको मानसिक स्वास्थ्यसहित शारीरिक स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक रहेको […]
काम शुरु गर्न सपना देख्नुपर्छ
जीवनमा अरुले भन्दा फरक र अनुकरणीय काम गरेका व्यक्तिको दैनिकी हाम्रा लागि प्रेरणाका स्रोत हुन् । लामो समयसम्मको मेहनत र परिश्रमबाट प्राप्त उनीहरुको सोच नै जीवन उपयोगी सीपका रुपमा हामीले ग्रहण गर्न सक्छौं । १० व्यक्तिको भनाई जुन तपाईका लागि उपयोगी हुन्छ : संर्घष गरेर बाँच्न सक्षम व्यक्ति नै सबैभन्दा योग्य हुन् : चाल्स डार्बिन […]
वर्ड फ्लुका कारण नेपालमै पहिलोपटक एकजनाको मृत्यु
काठमाडौं– नेपालमा पहिलोपटक बर्ड फ्लुका कारण मानिसको मृत्यु भएको छ । एच पाइभ एन वान भनिने बर्ड फ्लुबाट काभ्रेका एक युवकको मृत्यु भएको हो । बर्ड फ्लुका कारण काभ्रेमा एक जनाको मृत्यु भएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो । २१ वर्षिय ती युवाको रगतको नमूना परीक्षण गर्न जापान पठाइएको थियो […]
तातोपानी नाका आजबाट पुनः सञ्चालन
कोरोना कहरलाई ‘कमाउधन्दा’ बनाउनेविरुद्ध `विप्लव’ नेकपाको चेतावनी
सर्लाहीमा शान्तिपूर्ण रुपमा मूर्ति विसर्जन
देहरादूनमा नेपाली बालबालिकामाथि भएको यातनाबारे सत्यसथ्य बुझ्दै छौँ – परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
प्रदेश १ मा थपिए ५५६ कोरोना संक्रमित
दशैं बिदा सकिएसंगै राजधानीमा फेरी बढ्यो चहलपहल (भिडियो रिपोर्ट)
कोलम्यानलाई २ वर्षको प्रतिबन्ध
अब हप्तामा २ दिन मात्र कोरोना ब्रिफिङ
थप १ हजार ९५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ११ जनाको मृत्यु
कोरोना कहर : नेपालसहित आठ देशमा बालविवाह बढ्दै
वागमती प्रदेश प्रमुख प्रसाईलाई कोरोना पुष्टि
सेयर कारोबार आजबाट खुल्दै
स्याङ्जाका १२ सहित गण्डकीमा थपिए २३ कोरोना संक्रमित
थपिए ३ हजार ४३९ कोरोना संक्रमित, कहाँ कति (विवरणसहित)
२ लाख रुपैयाँसहित पाँच जुवाडे पक्राउ
अरिंगालकाे टाेकाईबाट डाेटीमा दुई बालिकाकाे मृत्यु